Chii chinonzi LED wall?
Madziro e LED anoshanda sei?
Chii chinonzi LED madziro anoshandiswa?
Mhando dzemadziro e LED
Madziro e LED anosiyana sei kubva kumabhodhi uye zvimwe zviratidzo zvechinyakare?
Yakawanda sei madziro e LED anodhura?
Chii chekufunga kana uchisarudza LED vhidhiyo madziro
Digital signage inzira inoshanda yekubatanidza vatengi vako nekuvandudza kutengesa.Uchishandisa iwo, unogona kuunza mavhidhiyo etsika, zvinyorwa, uye mifananidzo zvichienderana nenguva yezuva, zvinangwa zvebhizinesi, nzvimbo yebhizinesi, uye zvido zvevatengi vako.Nekudaro, signage yedhijitari haigone kurova simba remadziro e LED.Kuendesa izvo zvakafanana kubva kune imwechete dhijitari siginecha munzira dzinopfuura zana senge ivo chikamu cheimwe skrini chinhu chekutarisisa.Makore akati wandei apfuura, tekinoroji yemadziro evhidhiyo yaingowanikwa kune chikamu chidiki senhandare nezviitiko, kasino, uye mall.Saka, chii chinonzi LED wall?
Chii chinonziLED wall?
LED-madziro kana kuti LED Vhidhiyo rusvingo ihwindo hombe rakagadzirwa nechiedza-emitting diode rinoratidza zvinoonekwa semavhidhiyo, mifananidzo, zvinyorwa, uye mamwe maitiro emifananidzo.Inopa manzwiro emudhuri mukuru, unopenya usina majekiseni pakati peakasiyana mamodule anoaita.Naizvozvo, inobvumira kuvhara uchishandisa mavhidhiyo uye digitization yechero nzvimbo mukuenderera mberi.AVOE LED vhidhiyo madziro pakutanga aishandiswa sekunze kwedhijitari signage uye akatanga semonochrome.Kana RGB LEDs 'ruvara pamusika, zvese zvakachinja.
Nekuda kwekushanduka kwemusika weLED, kwave nekuvandudzwa kwepixel densities.Naizvozvo, gaka iro raimboseta LCD uye LED parutivi rava kuvharwa.Nekupenda ma LED ese ane dema resin epoxy, zviratidziro zviri mumadziro evhidhiyo yeLED zvinowana 'dema chairo'.Kuti abvise kutaridzika uye kuparadzanisa zvivheneko, vanowedzera mimvuri pakati pemwenje.
LED vhidhiyo madziro anosanganisira akati wandei e LED maratidziro anoratidzwa pane flat panel.Naizvozvo, zvakakosha kuve neavhareji yekuona chinhambwe mupfungwa paunenge uchiisa iyo LED vhidhiyo madziro.Iwe unoda yakanatswa pixel pitch kana vanhu vachizonyatsotarisa.Pixel mumadziro evhidhiyo yeLED uye imwe yekumusoro gomo mudziyo (SMD) zvakaenzana.Vanoverenga nhamba yepixels vachishandisa pitch.Kureba pakati peimwe neimwe SMD LED inosarudza kukwirira.
Sezvinofadza semadziro e LED, munhu haagone kubatsira asi kushamisika, anoshanda sei?Chii chinoita kuti vave nekupenya nekujeka ikoko?Pazasi pane zvakanyanya kukosha zvinhu zvinotsanangura kushanda kwemadziro e LED.
Ivo vanogadzira LED vhidhiyo madziro eakawanda mapaneru.Mamwe madiki mamodule ane RGB mwenje paari.Kazhinji, saizi yepaneru inenge 500 * 500mm mana mapaneru anoita sikweya mita.Iwo ma LED anoburitsa mwenje zvakananga apo akakomberedzwa neimba yepurasitiki nhema.Nokudaro, ine chiyero chepamusoro chekusiyanisa.Zvinoita kuti vakwanise kushambadzira kwekunze uko kune yakakwirira ambient mwenje.
Kusvika kure kwakadii imwe neimwe inotungamirwa pane pani?Kushambadzira kweakajairwa ma LED mapaneru emadziro evhidhiyo anoenderana nepixel pitch yayo.Nhasi, yakajairwa mapikisi e LED mapikisi e LED senge yaungawana muchechi pakati pe3-6mm.Ekunze LED vhidhiyo madziro kazhinji ane yakafara pixel pitch nekuti yekuona chinhambwe chakareba, uye kuoma kusiyanisa LED yega kubva kure.Kunyange zviratidziro zvakakura zvichidhura nekuda kwemapikisi akatsetseka, nzvimbo yakakura inobvumira nzvimbo yakawanda yenzvimbo yakafara pakati pasina kukanganisa nemufananidzo.Izvo zvese zvinoshandura kune, sezvaonekwa pamusoro, iyo pixel density.Kana padhuze, nhamba yakaderera pixel pitch inodiwa.Naizvozvo, iyo pixel pitch yaunosarudza chinhu chakakosha pakuona mutengo wayo.Iwe unoverenga pixel density zvichienderana nekuti vateereri vari padyo sei.Nekuda kweizvozvo, iwe unoda mwero wakatsetseka kana uri padyo uye hombe kana vateereri vari kure.
Mifananidzo iri mumadziro e LED inoparadzaniswa.Ingave software PC, vhidhiyo kadhi, kana hardware controller inovatonga.Nzira mbiri dzekushanda dzine zvakanaka uye dzakaipa.Kunyange iyo hardware controller ine yakakwirira kuita uye kuvimbika, haipe nzvimbo yekuchinjika.Iyo ine mashoma pixel resolution.Naizvozvo, kuratidza akawanda ekuisa masosi uchishandisa hardware-inodzorwa LED vhidhiyo madziro hazvigoneke.Sezvineiwo, ivo vanoshongedza software controller neakawanda anobuda makadhi, aine mamwe aine vhidhiyo yekutora ekuisa.Naizvozvo, ivo vanotsigira akasiyana ekuisa masosi uye vanobvumira yakazara pixel resolution.
Iko kushandiswa kwemadziro e LED kwakawanda nekuti iwe unogona kuzvigadzira zvinoenderana nekwavanoda kushandiswa.Nekuda kwehunhu hwavo hunokwezva, shanduko yemifananidzo isina musono, uye nyore kugadzirisa, maindasitiri mazhinji anoatora mumabasa avo ezuva nezuva.Pazasi pane mamwe mashandisirwo eAVOE LED vhidhiyo madziro.
Madziro e LED anogona kupa akajeka magiraidhi ane seamless shanduko.Ivo vanoshandiswa kupa nguva inonakidza mumapaki evaraidzo.Unogona kuzvishandisa sezviratidziro zvevhidhiyo kune veruzhinji vakaungana kuti vafare.Inogona kuve kuburikidza nekuverenga mapeji akafukidzwa nemunhu, kuendesa mameseji ekuona, uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa.
Imwe nzvimbo iyo madziro evhidhiyo eLED akawana kushandiswa kwakakura mazuva ano kuri mukati mechechi.Iwe unogona kuvaisa munzvimbo dzakasimba umo munhu wese anogona kuona uye kuwana.Madhuri evhidhiyo eLED anopa kutaurirana kwekuona rwiyo rwuri kuimba neungano, ndima yavari kuverenga, uye zvimwe zviziviso mukati menzvimbo yekunamatira.
Zvichida kushandiswa kwakakurumbira kwemadziro e LED kuri mukushambadzira.Isu takaaisa mune ese ari maviri emukati nekunze ekushambadzira masevhisi.Kunze kwe LED vhidhiyo madziro anotora kutarisisa kwevachazove vatengi.Vanogona kushanda pasi pehuwandu hwechiedza nekugadzirisa kurira kwavo.Sezvo vasina bezels, pane shanduko yakatsetseka pakati pemafuremu.Iko kushambadzira uchishandisa madziro e LED anogona kunge ari mukati kana kunze.
Shows, mabhaisikopo, uye zviitiko
Madziro e LED anodiwa kune vaimbi vemimhanzi.Iwo anoshandiswa kupa zvinokwezva zvinopenya zvinopenya panguva yemakonzati ehusiku.Pamusoro pezvo, kuti vabvumire vateereri kuti vaone muimbi, vanofambisa mafambiro nekutamba kwevanyori, vachibata vateereri nechiitiko chinotevera.
Kune akati wandei marudzi e LED vhidhiyo madziro.Pazasi pane matatu akajairika marudzi eLED vhidhiyo madziro.
1. Direct View LED vhidhiyo madziro
Aya ndiwo madziro evhidhiyo ayo agara achishandiswa zvakakura mukuratidzira kwekunze.Nhasi, vane sarudzo inodiwa yezviratidziro zvemukati.Direct View LED vhidhiyo madziro kuti ashaye bezels uye ane nhete mbiri.Naizvozvo, ivo vanounza chiitiko chisina musono chine akasiyana sarudzo yekukwira.
2. Indoor LED vhidhiyo madziro
Ivo vanoita zvemukati ma LED maratidziro kubva pamusoro-akaiswa ma LEDs.Naizvozvo, ivo vanogona kuendesa mapikicha pakakwirira resolution uye anogona kugadzirwa mune akasiyana curved maumbirwo.Nhasi, Indoor LED vhidhiyo madziro ndiyo yekuenda-kune tekinoroji mune dzidzo, varaidzo, uye kushambadzira kwemukati.
Izvi zvinogona kugadzira mifananidzo yechero chimiro uchishandisa kubuda kwemapurojekita akawanda.Chimiro chacho chinogona kuva chemhando ipi neipi ine sarudzo yepamusoro kana ichienzaniswa neyepurojekita imwe chete.
Madziro e LED imhando yepamusoro yedhijitari signage kana ichienzaniswa nemabhodhi uye mamwe masaini echinyakare.Pazasi pane musiyano:
Nepo zvikwangwani nezvimwe zvikwangwani zvechinyakare zvinopa zviratidzo zvakamira, iwo mavhidhiyo eLED madziro ane tekinoroji inokubatsira kupa vateereri vako chiitiko chekudyidzana.Madziro e LED anosiya chitarisiko chisingaperi chechiratidzo mupfungwa dzemushandisi.
Iwe haugone kushandura meseji yako mumasaini echinyakare uye mabhodhi emabhodhi.Sezvineiwo, unogona kusiyanisa meseji mumadziro evhidhiyo yeLED zvichienderana nezvinodiwa nevateereri.
Kubudirira uye kunakidza kuchinja
Nekuti ivo vari kukwezva uye vanogona kushandura mameseji, madziro e LED anoshanda mukushambadzira.Iwe unogona kushandisa magirafu kuratidza maitiro ekuita chimwe chinhu kana kushandisa chigadzirwa.Mukupesana, nekuti zvikwangwani zvakamira, mameseji awo anowanzova echinyakare uye asina basa.Iwe unofanirwawo kuparadzana neimwe mari, uchitsiva bhiribhodhi kazhinji.
Iwe unogona kugadzirisa software-inodzorwa neLED vhidhiyo madziro zviri nyore kuenderana nemamiriro senge nguva yezuva.Izvo hazvikanganise runako rwavo rwekuvhenekera.Meseji iri mumabhodhi ezviziviso nemamwe marudzi ezvikwangwani zvechinyakare haitenderi pekugara kwakadaro.
Mutengo wemadziro evhidhiyo ye LED unoenderana nezvinhu zvakasiyana, senge mune chero yakasarudzika tekinoroji.Iwo maficha ane LED madziro ane zvakare determinant.Zvinhu izvi zvinosanganisira:
Ndezvipi zvinodiwa pakugadzirisa vhidhiyo?
Sarudzo dzekumisa madziro e LED.Dzinogona kunge dzakasununguka-dzakamira, madziro, kana sirin'i dzakaiswa.
Rudzi rwekushandisa.Inogona kunge iri yemukati kana kunze, uye imwe neimwe ine zvakasiyana-siyana zvinodiwa zvepixel density.
Saizi yechiratidziro.Iwe unoda kuti yako LED vhidhiyo madziro yakakura sei?Inobata nhamba yezvinhu zvinofanira kushandiswa.
Iyo yakaoma sei iyo yekuisa maitiro?Iwe unozopedzisira wahaya technician kuti aise uye agadzirise zvigadziriso?
Magadzirirwo.Iwe unoda here kuti madziro e LED ave pachena, akapfava, kana akakombama?
Zvese zviri pamusoro apa zvine chekuita nemutengo wemadziro e LED.Mazhinji makambani anowanzo kuisa parutivi pakati pe $50-$350k yeLed wall project.
Isu tinokwanisa kugadzirisa madziro evhidhiyo e LED kusvika kune chero saizi zvichienderana nezvinodiwa nemushandisi.Naizvozvo, iwe unofanirwa kuzvibvunza kuti, "Ndeipi saizi yakakodzera yemadziro evhidhiyo ye LED kuti ndishandise?"Iwe unofanirwa kusarudza saizi yakakodzera yeiyo LED vhidhiyo madziro ekushandisa kwako.
Iyo inonziwo dot pitch, iyo pixel pitch inosarudza kujeka kwemifananidzo pamadziro eLED.Kuti uve nemifananidzo yakajeka, unoda diki diki (nzvimbo shoma pakati pepixels).Imhaka yekuti kune yakakwira pixel density uye zvirinani screen resolution.Kana iwe uine vateereri vadiki padhuze nemadziro eLED, yakaderera pixel pitch ndiyo yakanaka.Kana iwe uine vateereri vakawanda vari kure nemadziro, unogona kushandisa high dot pitch.
Iwe zvakare unofanirwa kufunga nezve kana iwe uchizoshandisa iyo LED mukati kana kunze.Indoor LED mavhidhiyo madziro ane yakaderera pixel pitch, nepo pixel pitch yekunze Vhidhiyo madziro ine yakakwira pitch.Mukuwedzera, ivo vanowanzodzivirira kunze kwekunze kwe LED vhidhiyo madziro.Iwo zvakare akajeka kana achienzaniswa nemukati vhidhiyo madziro.
Kugona kuroja pane kutenga
Sezvataona pamusoro, LED vhidhiyo madziro anogona kudhura chaizvo.Naizvozvo, iwe unofanirwa kuongorora zvakanakira nekuipira kutenga uchipesana neizvo zvekurenda.Kana iko kushandiswa kuri kwechinguva chidiki, semakwikwi, rally, uye makrusedhi, iwe unoenda nekurenda asi kana uri munhu webhizinesi ari kuda kushambadza nguva dzose, kuve nemadziro ako eLED ingangove sarudzo chaiyo.Iwe zvakare unofanirwa kufunga nezve chiyero chechikamu cheiyo LED vhidhiyo madziro.
Nyika yekushambadzira yave kukurumidza kuchinja kubva RGB mavara.Nekuda kwekusakwana kwavo, nzira dzechinyakare dzekushambadzira dziri kutarisana zvishoma nezvishoma nehunyanzvi senge LED vhidhiyo madziro.Usati wagadzirisa kutenga AVOE LED vhidhiyo madziro, funga pamusoro apa zvinhu sezvo zvichigona kukuchengetedza imwe mari.
Kunze Led Screen Led Display Kunze Led Display Led Screen Led Display Screen Led Sign